समाचार - Ningbo सलमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कं, लिमिटेड
व्हील स्पेसर कसरी छनौट गर्ने?
Ningbo Salman International Trade Co., Ltd जसको दर्ता पूँजी RMB1.88 मिलियन युआन छ। यो अटो एक्सेसरीज, हाइड्रोलिक मेसिनरी पार्ट्स, अफ-रोड एक्सेसरीज र बाहिरी उत्पादनहरू जस्ता उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकास गर्नमा विशेषज्ञता प्राप्त ट्रेड कम्पनी र कारखाना हो।
व्हील स्पेसर को महत्व
हामी "गुणस्तर पहिले, प्रतिष्ठा पहिले" को अवधारणालाई पालना गर्छौं, उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू उत्पादन गर्छौं र उच्च-गुणस्तरका सेवाहरू प्रदान गर्छौं, र हाम्रा उत्पादनहरू जस्तै व्हील स्पेसरहरू स्वदेशी र विदेशी बजारहरूले राम्रोसँग प्राप्त गरेका छन्।
हामीलाई किन व्हील स्पेसर र यसको कार्य चाहिन्छ
Ningbo Salman International Trade Co., Ltd को वेबसाइट समाप्त भयो
डिजाइन र उत्पादन को अवधि पछि, Ningbo Salman International Trade Co., Ltd. को वेबसाइट समाप्त भयो। हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्न नयाँ र पुराना ग्राहकहरूलाई स्वागत छ। तपाईंको विचार र सुझावहरू हाम्रो चालक शक्ति हुन्। हामी सकेसम्म चाँडो तपाईंको जानकारी जवाफ दिनेछौं!
अटो पार्ट्स एक प्रकारको उत्पादन हो जसले सम्पूर्ण कारको प्रत्येक एकाइलाई बनाउँछ र कारलाई सेवा दिन्छ।
हाम्रो 2000 वर्ग मीटर भन्दा बढी नयाँ कार्यशाला प्रयोगमा राखिएको छ
हाम्रो 2000 वर्ग मीटर भन्दा बढी नयाँ कार्यशाला प्रयोगमा राखिएको छ। संख्यात्मक रूपमा नियन्त्रित उत्पादन केन्द्र र केही एसेम्बली लाइनहरू नयाँ कार्यशालामा सारिएका छन्।